मजदुर भोकै छन् त ! कसलाइ बाढिबक्सनुभयो ८० करोडको राहत ?
Kumar Shrestha calendar_today १९ बैशाख २०७७, 8:32 am
नमस्कार,अभिवादन, लालसलाम, जय नेपाल…..
कुन सम्मान हजुरलाई मन पर्छ त्यही मिलाएर बुझि बक्सनु होला ।
म एक श्रमिक हु । म दिन रात,घाम पानी,अनि दुख,समस्या भनेर कहिले बस्दिन किनकी मेरो परिवारलाइ बिहानबेलुका छाक टार्न समेत निकै कष्ट छ । किनकी म श्रमिक हु ।
यतिबेला कोरोनाभाइरसले बिश्व आतंकित बनेको छ । बिश्वका लगभग एक अर्ब ६० करोड मजदुरको रोजगार खोसिएको छ त्यसमध्ये म पनि एक हु । किनकी म मजदुरी गर्ने मजदुर हु ।
नेपालमा पनि लकडाउन छ । लाखौँ युवाको रोजगार खोसिएको छ । नेपालका सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली यतिबेला भेटघाट तथा फाल्तुकुरैमा ब्यस्त होइसिन्छ् ।
प्रधानमन्त्री ज्यु यतिबेला म जस्तै लाखौँ श्रमिकहरु यो बेला साच्चिनै न खोले न भातको
पिडा त मलाइ भएको छ अनि म जस्तै श्रम गर्ने श्रमिकलाइ भएको छ । प्रधानमन्त्री ज्युका भाषण त धेरै सुनियो अनि उखानटुक्का पनि । प्रधानमन्त्री ज्यु यतिबेला म जस्तै लाखौँ श्रमिकहरु यो बेला साच्चिनै न खोले न भातको बनेकाछन ।
काम गरौँ भने सरकार घरमै बस भन्छ । अनि हामी जस्तो बिहान बेलुका मजदुरी गर्नेलाइ छाक टार्न निकै कठिन भएको ब्यथा कसलाइ सुनाउ सरकार ? यो बेला श्रमिकको लागी न राहत छ । न त कुनै ब्यवस्था । केहि समय अघि सम्माननिय प्रधानमन्त्री ओली ज्यु हजुरले त सुनिबक्सिनुभएको होला ।
चिल्ला गाडीमा चढेर यात्रा गर्नेहरुलाइ बिचरा हामी जस्तो हिडेर यात्रा गर्नेको पिडा दम्भले भरिएकोे सरकारलाइ के था ?
नेपालमा लकडाउन पछि धेरै श्रमिकहरु बिचल्ली भएका ? श्रमिकहरुले हिडेर पुर्वबाट पश्चिम पुगेका ? यस्तो दर्दनाक अबस्था प्रधानमन्त्री ज्यु हजुरलाइ त थाहै होला । यतिबेला श्रमिकको न काम छ न खानको लागी दाम नै ? हुनत काठमान्डौको महलमा बसेर गरिवको कुरा कस्ले सुन्ने ?अनि झुपडीको पिडा कस्ले बुझ्ने ? चिल्ला गाडीमा चढेर यात्रा गर्नेहरुलाइ बिचरा हामी जस्तो हिडेर यात्रा गर्नेको पिडा दम्भले भरिएकोे सरकारलाइ के था ?
श्रमिकको पिडा नसुन्ने भए अब ठुला पदमा रहनुभएका नेता ज्युहरु यस्तो बकवास भाषण गर्र्न झाडिदिनुस् । नेपालमा कोरोना भाइरसको कारणले लाखौ युवा बेरोजगार भएको कुरा थाहा हुदाहुदै पनि के हेरेर बस्नुभएको प्रधानमन्त्री ज्यु ?
यतिबेला पाटी भित्र चर्काचर्की बिरोध गरेर बस्ने अनि चिप्ला भाषण गरेर आश्वासन दिने समय होइन जस्तो लाग्छ
कोरोनाले यतिबेला कतिको घरबास उठेको कुरा कस्ले सुनिदिन्छ ? मजुदर गर्ने मजदुरीको रोजगार खोसेको थाहा हुदैहुदैे सरकार किन ट्वाल्ल परेर हेरेको ? यतिबेला पाटी भित्र चर्काचर्की बिरोध गरेर बस्ने अनि चिप्ला भाषण गरेर आश्वासन दिने समय होइन जस्तो लाग्छ । यो बेला त श्रमिक,मजदुर अनि गरिबको घरमा राहत लिएर पुग्ने समय हो । बोलीले मात्रै पुग्दैन गरेर पनि देखाउनु पर्योनी सरकार अब ।
नेपालमा लकडाउनको ३९ औ दिनमा छौ । यतिको दिनदेखी हामी श्रमिकहरु बेरोजगार बस्दै आएकाछौ । खाने सामल सकियो , न काम छ न त दाम ? यस्तो अबस्थामा नेपालमा कोरोना कोष पनि स्थापना गरेको सुनिन्थौ अनि धेरैले सहयोग गरेको कुरा पनि सुनिन्थ्यो ? त्यो पैसाा किन सदुपयोग नगरेको सरकार ? अहिले नगरे त्यो पैसा महामारी सकिएसी गर्ने हा सदुपयोग ?अनि सम्माननिय प्रधानमन्त्री ओली ज्यु ८० करोडको राहत बाढ्यौ भनिबक्सनुहुन्छ , नेपालमा त मात्रै ३ करोड जनता छन त्यै पनि सबैको घरघरमा राहत पुगेको छैन ।
क-कसलाइ बाढिबक्सनुभयो ८० करोडको राहत
क-कसलाइ बाढिबक्सनुभयो ८० करोडको राहत ? सुनिन्छ श्रमिकलाइ पनि राहत बाढियो रे त्यो पनि कुहिएको अनि काम नलाग्ने राहत , नाम मात्रको राहत,काम गरि टोपाले जस्तो मात्रै । काम गरेर देखाएको जस्तो ,मात्रै चर्तिकला ? कि त्यो राहत कोषको रकम आफ्नै पोल्टामा खन्याइबक्सनुभयो सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु ?
यो म एक मजदुर भएको नाताले मात्रै आक्रोस हो ।
यदि साच्चिनै जनताकै सरकार हो भने हामी जस्ता भोका मजदुरलाइ सेवा गरिबक्सनुस्,कोषमा जम्मा गरेका रकमबाट राहत बाढिबक्सनुस् हैन भने यो जम्मा गर्नुको कुनै औचित्य रहेन ।
अर्को कुरा सरकार,नेपालका लाखौँ युवा प्रदेशमा छन ।
यतिबेला लकडाउन छ । उनीहरुको पिडा सुन्नेकी नसुन्ने ?नेपालमा रहेका बेरोजगारी युवालाइ रोजगारको ब्यबथाको बारेमा सोच्नेकी नसोच्ने सरकार ? यो म एक मजदुर भएको नाताले मात्रै आक्रोस हो ।
सम्पुर्ण श्रम गर्ने नेपालीहरुलाइ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिबसको शुभकामना।
लेखक अनिता थापामगर सञ्चारकर्मी